Lorena Franco. 11 Mibvunzo yeMunyori waAnochiziva | Zvazvino Zvinyorwa
Nhasi ndinotaura na Lorraine Franco, munyori weBarcelona ane mukurumbira uye mutambi, airangarira mambokadzi mutsva weanonzi pamba noir. Ndipindure kuti 11 mibvunzo pamusoro pavo mabhuku aanofarira, basa rake, zvinomufadza, vanyori vake, mapurojekiti ake uye nhau dzaakaronga. Kubva pano ndinokutendai nerubatsiro rwenyu rwemutsa uye nguva yamakapedza.
1 Unoyeuka here bhuku rekutanga rawakaverenga?
2 Uye nyaya yekutanga iwe yawakanyora?
3 Nderipi bhuku rekutanga rakakurova uye nei?
4 Ndiani munyori wako waunofarira? Iwe unogona kusarudza inopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
5 Ndeupi hunhu mubhuku raungadai uchida kusangana nekugadzira?
6 Chero mania kana zvasvika pakunyora kana kuverenga?
7 Uye yako yaunofarira nzvimbo uye nguva yekuzviita?
8 Ndeupi munyori kana bhuku rakakanganisa basa rako semunyori?
9 Mhando dzako dzaunofarira?
10 Chii chauri kuverenga izvozvi? Uye kunyora?
11 Iwe unofunga sei chiitiko chekutsikisa chiri chevanyori vakawanda sezviripo kana kuti uchida kutsikisa?
12 About Lorena Franco
Unoyeuka here bhuku rekutanga rawakaverenga?
Ini handirangariri chaizvo yaive yekutanga, kunyangwe ini ndakaverenga zvakawanda kubva kuEl Barco de Vapor imba yekutsikisa, ndiyo yandakatanga nayo Uye zvekare zve Esther nenyika yake, The Little Prince...
Uye nyaya yekutanga iwe yawakanyora?
Pakutanga akanyora nyaya. Ipfupi, yekufungidzira nyaya... asi senyaya yekutanga, ichizara zvizere muchikamu chekunyora, zvakaitika muna2008 na Rungano rwemweya miviri, iyo inogona kuwanikwa paAmazon, kunyange ndichifunga maitiro angu ekunyorera achinja zvakanyanya kubva ipapo.
Mubati mune ryenaJD Salinger. Kwenguva yakareba raive rimwe remabhuku andainofarira uye rakandirova nekuda kwekukwanisa kwaro kuratidza hunhu hwese hwekuyaruka (mune iyi ma40s), nekukanganisa uye kusakwana, uye munhu wekutanga anorondedzera izvo zvinoita kuti ive yechokwadi, ichipinda zvizere munhoroondo uye zviitiko zvacho. Kunzwa kusurukirwa, kusanzwisisa, kusahadzika, kupokana, kuratidzira uye, pamusoro pezvose, manyorerwo azvinoitwa, yakakanganisa nzira yangu yekunzwisisa mabhuku uye neniwo panguva iyoyo.
Ndine akati wandei Vanyori vanodikanwa, vakasiyana kwazvo kubva kune mumwe nemumwe maererano nenyaya uye nyaya, asi ivo vakwanisa kundiita kuti ndiverenge rimwe nerimwe remazita avakaburitsa uye, mune eazvino, ivo vachadaro.
JD Salinger, Thomas Mann, Vivian Gornick, Margaret Atwood, Joël Dicker, Ernest Hemingway, BA Paris, Liane Moriarty… Zvakanaka, rondedzero yacho haina magumo.
Parizvino, ndichizviisa mune yazvino novel, Marcus Goldman, munyori we Chokwadi pamusoro penyaya yaHarry QuebertnaJoël Dicker. Kunyangwe semunyori ini ndichiwanzo kuzviisa mushangu dzevakadzi, ndinoda hupenyu hune Marcus mungano; inotyisa uye ndeyechokwadi, inowanikwa uye isingasvikike panguva imwe chete. Anoratidzika semunhu mukuru kwandiri.
Kwete mazhinji, chaizvo. Panguva yekunyora, kana ndikasaita kunze, ini ndinoda hwindo kumberi nekunyarara. Pamusoro pazvose silence uye muyero wakanaka we caffeine. Handina zvekuvaraidza zvekuverenga; Ndakaverenga chero kupi, vakagara, vakamira, pamba, munzira yepasi pevhu, neruzha, pasina ruzha ...
Nguva yangu yandaifarira kunyora iri na mangwanani uye nemaawa mashoma masikati / manheru, zvakanaka kumba. Vhura mi hofisi ndipo pandinosvika pakutarisa ndowana kurudziro. Kuverenga, chero nguva, kunyangwe ini ndichiwanzo kuzviita zvakanyanya masikati / manheru.
Iko hakuna kunyanya, chokwadi. Vanyori vechinyakare uye vazvino vakandikanganisa. Ndinofunga kuti Mubati mune rye ichiripo mandiri uye, nekuremekedza mumwe munyori, mareferenzi mumabhuku ematsotsi akaita saAgatha Christie kana Mary Clark Higgins akandiita kuti ndione madire andinoita nekunzwisisa zvakavanzika, zvese pakuverenga uye pandinotanga kugadzira nyaya uye kunyora . Nhasi handisisina simba, Ini ndinowedzera kutorwa nehungwaru hwangu mushure mekunge nda "edza" zvakawanda uye nemhando dzakasiyana siyana, uye ini ndawana yangu yega maitiro semunyori.
Iwo andinonyora. Basa rangu kuAmazon nebasa rangu mukudhinda rinosiyaniswa nemhando mbiri idzo, dai ndaisadzida, zvaisazokwanisika kudzishandira. Ndiri kunakidzwa nedingindira re nguva yekufamba, yazvino uye yerudo nhoroondo, asi izvo hazvisi zvese zvinoenderana nenyaya yerudo. Uye, kune rimwe divi, iyo zvepfungwa zvinonakidza, mhosva yekuparwa uye chakavanzika, inova iyo yandinonyora yekutsikisa neyekunze, parizvino ine Sphere yemabhuku. Muna Kukadzi 2019, angangoita makore maviri apfuura Iye anozviziva (Ediciones B) mutsva mutsva unosvika.
Ndapedza kuverenga Mwenga wechiGypsy naCarmen Mola uye zvino ndotanga kuverenga Chekupedzisira, moyonaMargaret Atwood.
Ndiri kushanda pane dzakasiyana nyaya, ndichishanda pa fora ezvinyorwa zvakatonyorwa kare nedingindira rekufamba munguva uye imwe yerondedzero yazvino kutsikisa paAmazon pakati pegore rino neinotevera, uye, kune rimwe divi, kugadzirira a mutsva unofadza uye nepfungwa yeimwe yakanamira mumusoro.
Kuwanika kunzvimbo yekutsikisa zvagara zvakaomarara, pane vanyori vakawanda kupfuura vaverengi. Nekudaro, izvozvi munyori ane zvimwe zvinoburitswa senge kuzvishambadza pachikuva zvine simba seAmazon, uye nekwaniso yekuti inosvika kune vaverengi kutenderera pasirese uye kuti nyaya iyi hairambe yakavharirwa mudhirowa. Mune yangu nyaya nIni handina kumbobvira ndatsvaga muparidzi kana kuendesa chinyorwa, ini ndaisafanirwa kutarisana neyaityiwa "kwete", nekuti ndaifarira musoro wekuzvitsikisa Uye, muchokwadi, ini ndinoifarira zvakanyanya zvekuti ndinoramba ndichienzanisa nzira yandinoburitsa imwe yenhau kana imwe zvinoenderana nemhando. Hongu zvirokwazvo, Ini ndinokurudzira vese vanyori, idzo huru nyaya idzo muparidzi asingakwanise kuramba, kuyedza uye kusarega. Hapana chinokona. Iko kune, senge zvese zvinhu muhupenyu, netariro. Ndakazviona.
Mabhuku eAmazon, universal link: http://relinks.me/lorenafranco
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Lorena Franco. 11 mibvunzo yemunyori waElla Knows
Kubvunzana kukuru. Ndakaverenga mabhuku akati wandei nemunyori uyu nekuti kare ini ndaitoziva chimiro chake semutambi uye ndaida kuona kuti akanyora sei. Mabhuku ese andakaverenga ndakaafarira zvakanyanya. Ini ndinofunga ane chimiro chakanakisa, chakasiyana uye chazvino, uye ramangwana rakajeka mune zvinyorwa.
6 mabhuku nezve D-Day, iyo Normandy kumhara